शर्माले आफ्नो विशेष प्रविधिबाट with 33 वटा ज created्गलहरू बनाएका छन् हरियो नवीकरणीय
मानिस जसले भारतमा वन बनाउँछ उसले तपाईको आफ्नै बगैचामा पनि गर्न सक्छ
मानुएल रामीरेज | | पारिस्थितिक कृषि, पारिस्थितिकी
निश्चय पनि हामी मध्ये कोही जसलाई जीन जिओनोले "रूख रोप्ने मानिस" भनेर लेखिएको कथा थाहा पाउनेछौं, जसले एक कल्पनावादी गोठाला एलेजार बुफियरको कथा बताउँदछ, पूर्णतया विश्वासयोग्य भए पनि, जसले धेरै बर्षसम्म ठूलो क्षेत्रमा रूख रोप्न आफूलाई समर्पण गर्‍यो प्रोभेन्सको र जीवन र हरियालीले भरिएको क्षेत्रमा एक पटक उजाड फोहोर भएको के हुन्छ। एक अविश्वसनीय कहानी यसले कसरी देखाउँदछ कि हामीसँग कसरी हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति छ थोरै लगनशीलता र राम्रो कामको साथ, जुन शुभेन्दु शर्मासँग छ।
शर्मा उनले जीवनभर रूख रोप्न ईन्जिनियरको जागिर छोडे। मियावाकी विधि प्रयोग गरेर बिरुवा बढ्न र केहि बर्षमा कुनै क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर वनमा परिवर्तन गर्न। यसले दुई बर्षमा भारतभर 33 XNUMX वटा ज create्गलहरू निर्माण गर्न सफल भएको छ। यहाँ हामी तपाईलाई कसरी देखाउँछौं कि यो कसरी गरीयो।
एक औद्योगिक इन्जिनियर शुभेनु शर्माले तपाईको बगैचामा वनको प्रकृति ल्याउने सम्भावना ल्याउँछ। यो सबै शर्माबाट सुरु भयो प्राकृतिक चिकित्सक अकिरा मियावाकीलाई सहयोग गर्न स्वैच्छिक टोयोटा प्लान्टमा ज cultiv्गली खेती गर्न जहाँ उसले काम गर्‍यो। मियावाकीको प्रविधि थाईल्याण्डबाट अमेजनमा वन पुनः निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको छ, शर्माले सोच्न लगाए कि यसले भारतमा पनि यस्तै गर्न सक्छ।
शर्माले मोडेलको प्रयोग गर्न थाले र आफ्नै देशको लागि विशेष संस्करण सिर्जना गर्‍यो केही विशेष माटो गुणहरू प्रयोग गरेर बिभिन्न परिमार्जन पछि। उनले ज creating्गल सृष्टि गर्ने पहिलो प्रयास उत्तराखण्डको आफ्नै बगैंचामा भएको थियो, जहाँ उसले एक बर्षमा एक सिर्जना गर्न सफल भयो। जसले उसलाई पूर्ण-समय जानको लागि पर्याप्त आत्मविश्वास प्रदान गर्‍यो, जागिर छोडिदियो, र वर्षको धेरैजसो आफ्नै पद्धति अनुसन्धानमा बिताउँथ्यो।
२०११ मा शर्माले एफोरेस्ट्ट, प्राकृतिक, जंगली र आत्मनिर्भर वनहरू प्रदान गर्ने सेवा सिर्जना गर्नुभयो। शर्माको आफ्नै शब्दहरूमा: «विचार प्राकृतिक वनहरू फिर्ता ल्याउने थियो। तिनीहरू केवल आफैंले दिगो हुँदैनन् तर शून्य रखरखाव छ«। उनको अर्को ठूलो निर्णय टोयोटामा उच्च आय इन्जिनियरको रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनका लागि रूख रोक्नको लागि आफ्नो जागिर छोड्नु थियो।
शुरुआत कडा थियो, तर अब शर्मा6व्यक्तिको टोली छ। तिनीहरूको पहिलो अर्डर एक जर्मन फर्नीचर निर्माताबाट थियो जसले १००० रूखहरू रोप्न चाहे। त्यसबेलादेखि, एफोरेस्टले clients 10000 ग्राहकहरूको सेवा गरिसकेको छ र उनीहरूले करीव 43 54000,००० रूखहरू रोपेका छन्।
1 कसरी एफोरेस्ट काम गर्दछ
कसरी एफोरेस्ट काम गर्दछ
एफोरेस्ट एक पूर्ण नियन्त्रण र कार्यान्वयन सेवा प्रदान गर्दछ जुन सामग्री समावेश गर्दछ, उपकरण, उपकरणहरू र मियावाकी विधि प्रयोग गरेर परियोजनाको लागि आवश्यक सबै कुरा। प्रक्रिया माटोको परीक्षणबाट शुरू हुन्छ र यसमा सबै प्रकारका बोटबिरुवाहरू रोप्नको लागि सही बनाउन आवश्यक पर्ने चीजहरूको खोजी गरेर।
जमिन तपाइँ कम्तिमा start square वर्ग मिटर हुनु पर्छ अध्ययन सुरु गर्नका लागि कस्तो किसिमको बोटबिरुवा र बायोम चाहिन्छ। परीक्षण पछि, पहिलो जवान बोट बायोमासको साथ माटोमा यसलाई अझ उर्वर बनाउनको लागि तयार गरिन्छ।
अन्तिम देशी प्रजातिहरूको to० देखि १०० प्रकारका बिरुवा रोप्ने प्रक्रिया शुरू हुन्छ। अन्तिम चरणले अर्को दुई बर्षको लागि क्षेत्रलाई उर्वर र सिँचाइमा केन्द्रित गर्दछ, यस समय पछि, ज forest्गललाई अब कुनै मर्मतको आवश्यकता पर्दैन र यो आफ्नै समयमा टिकाउ हुनेछ। एफोरेस्टको ठूलो फाइदा भनेको यसको कम लागतको मोडल हो जुन युवा झाडीहरू प्रति वर्ष लगभग एक मिटर बढ्दै जान्छ।
एफोरेस्ट भारतको कुल ११ शहरहरुमा fore 33 वटा वनहरु सिर्जना गरेको छ र यो संख्या वृद्धि गर्न चाहन्छ। शर्माको यस प्रविधिको विकास गर्ने र राख्नको लागि धेरै योजनाहरू छन् कि अधिक व्यक्तिहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दछन्।
मा योजना छ क्राउडफन्डिंगमा आधारित सफ्टवेयर सुरूवात गर्नुहोस् ताकि कोही पनि उपकरणमा तपाईंको क्षेत्रमा तपाईंको आफ्नै देशी बोट प्रजातिहरू थप्न सक्षम हुनुहोस्। त्यसोभए जब कोहीले आफ्नै ज plant्गल रोप्ने इच्छा गर्दछ, तिनीहरू आफैंमा यसलाई दिगो बनाउनको लागि कुन प्रजाति लिन्छन् भनेर जान्दछन्।
उनको अर्को विचारहरु वातावरण सिर्जना गर्नु हो जहाँ तपाईं आफ्नै बगैंचाबाट फल लिन सक्नुहुन्छ वा प्लट यसलाई बजारमा किन्नु भन्दा सजिलो छ। जंगलहरू सिर्जना गर्न एक चाखलाग्दो पहल जुन कुनै रखरखाव आवश्यक पर्दैन र यदि तपाईं आफ्नै सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं यसको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ वेब वा शर्मालाई आफै info@afforestt.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » पारिस्थितिकी » पारिस्थितिक कृषि » मानिस जसले भारतमा वन बनाउँछ उसले तपाईको आफ्नै बगैचामा पनि गर्न सक्छ
मलाई तपाईंको पोष्ट मन पर्यो, यो एकदम चाखलाग्दो छ। जबकि अरूहरू सम्पूर्ण वन काट्न समर्पित छन्, अरूले त्यसलाई सिर्जना गर्दछ। मलाई यो विचार मनपर्‍यो।
धन्यवाद Beitraz! यदि हामीले नष्ट गरेको भन्दा हामीले सिर्जना गरेको हो भने, हामी सबै राम्रो हुन्छौं
धन्यवाद मैन्युएल। यस पोष्टले मलाई मुस्कुरायो। म एउटा स्टार राख्छु जब म put राख्न चाहन्छु तर यसले मलाई सुधार गर्न अनुमति दिदैन। धन्यबाद
केहि पनि हुँदैन! महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंले पोष्ट मनपराउनु भयो: =)
कार्लोस टोलेडो भन्यो
धेरै राम्रो विचार
म सेवामा काम गर्छु जहाँ हामी यो गर्न सक्छौं
कार्लोस टोलेडोलाई जवाफ दिनुहोस्
विश्वको पहिलो थोरियम रिएक्टर २०१ 2016 सुरक्षित र सस्तो आणविक उर्जा प्रस्ताव गर्दै
अष्ट्रेलियामा सौर्य ऊर्जाको गति बढेको छ